एप्पल स्क्रिनमा टच आईडी को लागी प्याटेन्ट दर्ता गर्दछ ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | एप्पल, मोबाईलहरू, हाम्रो बारेमा
नयाँ प्रविधिको विकास त्यो सानो साना स्मार्टफोनहरू लागू गर्दछ बढ्न जारी छ। र यद्यपि एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा यो वर्षौं देखि एक नेता भएको छ। एप्पल आईफोनलाई अधिक पूर्ण बनाउनको लागि आफ्नो प्रयासमा रोक्दैन संस्करण पछि संस्करण। एउटा नवीनता कुनै श doubt्का बिना, र प्रयोगकर्ताहरू आफैंको अनुसार, हालसालै यो यसको अनुपस्थितिबाट स्पष्ट छ.
प्रोसेसर, सफ्टवेयर र क्यामेरामा सुधार बाहेक, पहिले नै कुनै उल्लेखनीय समाचार बिना आईफोनका धेरै संस्करणहरू छन्। हिजो म Tuesday्गलबार १ Cup हामी कपेरतिनोबाट त्यो जान्न सक्षम भएका छौं स्क्रिनमा टच आईडीको एकीकरणसँग सम्बन्धित पेटेन्ट दर्ता गरिएको छ। र यद्यपि यो अझै नवीनता होईन, यो त्यस्तो आईटम हो जुन आईफोनको भविष्यका संस्करणहरूमा सानो सुधार प्राप्त गर्न सक्दछ।
1 अनुहार आईडी पहिलो पटक टच आईडी संग एक हुन सक्छ
2 अर्को आईफोनमा अन्डर-स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट रिडर?
अनुहार आईडी पहिलो पटक टच आईडी संग एक हुन सक्छ
को आईफोनमा मेटाइएको पछि मान्यता योग्य र पौराणिक बटन «घर», आईफोन X का संस्करणहरू बन्द फिंगरप्रिन्ट मान्यता टेक्नोलोजी। एउटा सुरक्षा प्रणाली जसले काम गर्‍यो, र अझै पनि आईफोन and र पछिकोमा उत्कृष्ट काम गर्दछ। नयाँ स्मार्टफोनसँग सबै स्क्रिनमा टच आईडी एकीकृत गर्न कुनै ठाउँ थिएन.
फिंगरप्रिन्ट रिडर हटाउने निर्णयले आईफोनलाई असुरक्षित बनाएन। सट्टा, र यो यदि यो एक अग्रिम थियो, नयाँ संस्करणहरू हुनेछ अनुहार पहिचान टेक्नोलोजी भनिन्छ अनुहार ID। अवस्थित टेक्नोलोजी जसमा एप्पलले सुधार गरेको छ यसलाई "असम्भव" बनाउनका लागि। के त्यहाँ हाम्रो आफ्नै अनुहार भन्दा याद गर्न सुरक्षित र सजिलो पासवर्ड छ?
तथ्य यो छ कि यद्यपि अनुहार आईडी धेरै मन परायो, र हामी भन्छौं कि यो एक महान अग्रिम थियो, त्यहाँ तिनीहरू हुन् जो पहिलो क्षण बाट तिनीहरूले फिंगरप्रिन्ट रिडर छुटे। केहि कम प्रकाश वा छाया अवस्थामा, अनुहार पहिचान असफल हुन सक्छ। फिंगरप्रिन्ट रिडरसँग केहि हुँदैन। त्यसकारण, केहि बर्षदेखि एप्पल स्क्रीन मा टच आईडी एकीकृत मा काम गरीरहेको छ.
अर्को आईफोनमा अन्डर-स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट रिडर?
हामी कसरी धेरै बर्षहरूमा हेर्न सक्षम भएका छौं एप्पलले अवस्थित टेक्नोलोजीलाई "उधारो" दिन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नैमा सुधार गर्दछ। यसको स्पष्ट उदाहरण हो अनुहार आईडी नै। एप्पलले आईफोन एक्समा कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले अनुहार पहिचान उपकरणहरूमा पहिले नै प्रयोगमा थियो यसलाई सुधार गर्न व्यवस्थित केवल हाम्रो अनुहारको फोटो मात्र लिने छैन, तर हाम्रो अनुहारको पूर्ण म्यापि performing प्रदर्शन गर्दै १º०º x १º० सम्म।
के स्क्रिनमा बनेको टच आईडीसँग पनि त्यस्तै हुनेछ? हामी कसरी हालसालै हेर्दछौं, सामसु S S10 जस्ता उपकरणहरूले यसलाई पहिले नै समावेश गरिसकेका छन्। र यद्यपि एक अपेक्षाकृत सकारात्मक कार्यक्षमता संग, पढ्ने उपकरणको एक विशिष्ट क्षेत्र मा सीमित छ। केही स्रोतहरूले यो दावी गर्‍यो अर्को आईफोन स्क्रिनमा कहीं पनि हाम्रो औंठाछाप पढ्न सक्षम हुनेछ। जे भए पनि, एप्पलले कहिले पनि यसको पेटेन्टहरूको बारेमा डेटा प्रकट गर्दैन, हामी आईफोन १२ वास्तविकता नभएसम्म पर्खनु पर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » एप्पल » एप्पलले स्क्रिनमा टच आईडीको लागि प्याटेन्ट दर्ता गर्दछ
गुगल गृह स्थापना र कन्फिगर गर्ने तरिका